Codsiyada ugu wanaagsan ee hambalyada Maalinta Hooyada | Androidsis
Codsiyada ugu wanaagsan ee hambalyada Maalinta Hooyada
Emilio Garcia | 27/04/2022 10:00 | La cusbooneysiiyay 28/04/2022 11:37 | Codsiyada Android
Waa mid ka mid ah maalmaha muhiimka ah oo loo asteeyay bilowga bisha May. Maalinta Hooyadu waa taariikh muhim ah, gaar ahaan waa qofka mar walba garab taagan marka aad u baahan tahay, ha ahaato mid wanaagsan iyo mid xunba, sidoo kale taa beddelkeeda.
Taariikhdan muhiimka ah, waxa ugu wanaagsan in loo hambalyeeyo, ama adoo diraya fariin, u diraya hadiyad ama la yaab si dhijitaal ah. La yaqaan apps hambalyada ugu wanaagsan ee maalinta hooyada, mid kasta oo iyaga ka mid ah way kala duwanaayeen iyaga oo u soo bandhigay qaab ka duwan oo la yaab leh.
1 Maalinta Hooyada Farxada leh
2 U hurida Maalinta Hooyada
3 Gabayo Maalinta Hooyada
4 Video Maalinta Hooyada Farxada leh
5 Hambalyo Maalinta Hooyada
6 Weedhaha Maalinta Hooyada Farxada leh
Maalinta Hooyada Farxada leh
Waa codsi fudud oo aad ku dooran karto sawirro, kaarar iyo kaarar aan dhammaad lahaynDhammaantood way kala duwanaayeen, sidoo kale waxay ku habboon yihiin maalintan gaarka ah. Faahfaahinta ka mid ah, waxaad isticmaali kartaa wallpapers abuuray sawiro ka dibna la wadaagto haddii aad rabto in aad shabakadaha bulshada ugu caansan.
Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ayaa ah in inta badan la cusbooneysiiyo, oo ay ku jiraan waxyaabo cusub, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah codsiyada muhiimka ah ee gudaha Play Store. Way ku habboon tahay haddii aad rabto inaad si degdeg ah u hambalyeeyso, maadaama ay ku siin doonto wax kasta oo aad u baahan tahay maalintan gaarka ah.
Codsiga uma baahna intarneetka si uu u shaqeeyo, inkastoo ay habboon tahay in laga faa'iidaysto haddii aan rabno in aan ku soo dirno WhatsApp, Telegram, Email iyo siyaabo kale. Waxay ku tusinaysaa xoogaa xayaysiis ah xagga hoose, wali ma dhibsato marka la isticmaalayo. Lagu taliyay Maalinta Hooyada, oo ah bilowga Maajo.
Maalinta Hooyada Farxada leh 2022
U hurida Maalinta Hooyada
Waxaa jirta hal hooyo, ugu yaraan waa waxa had iyo jeer la yiri. Ku qaadashada dhowr daqiiqo maalintan gaarka ah waxay ku ogeysiin doontaa sida aad u jeceshahay iyada. Dareen-celinta waxay qaadan doontaa kaliya hal daqiiqo, gaar ahaan haddii aad doorato weedh wanaagsan, go'an oo gaar ah.
Hooyooyinka iyo carruurtu waxay caadi ahaan abuuraan dammaanad gaar ah, tan iyo waxyaabo kale oo badan ayaa muhiim ah in la helo faahfaahin, iyada oo aan loo eegin sida ay u yar tahay. U hurista waxaa laga yaabaa inay u tagto hooyadaa ama soddohdaa, ama qofkaas oo ku daryeeshay sidii inay hooyo yihiin.
Waa codsi fudud in la isticmaalo, dooro sawir qoraal ah, shakhsiyeeyo oo u dir mid ka mid ah codsiyada fariimaha, iimaylka, iyo xulashooyin kale. Sawirada waxaa loo isticmaali karaa gidaar ahaan, ku habboon haddii aad rabto inaad hadyaddaas ku shaqsiyayso taleefanka hooyada.
HOOYO qaali aad baan kuu jeclahay
Developer: Solomon Apps1
Gabayo Maalinta Hooyada
Haddii aad qoraal badan tahay waxay u badan tahay codsigii aad raadineysay inuu la yaabo maalinta hooyada. Gabay qurux badan ayaa ka dhigi doona inay ku sii jirto xusuustaada, markaa waa inaad doorataa mid ka mid ah kumanaanka la heli karo. Waa aalad si fudud loo isticmaali karo, maadaama ay tahay inaad nuqul ka sameysato qoraalka oo aad ku dhejiso meel kasta oo aad rabto si degdeg ah oo sahlan.
Waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan codsigan caanka ah waa in inta badan lagu cusbooneysiiyo gabayo cusub bishiiba, oo ay ku daraan hal-abuurayaasha laftooda. Mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu ku yimaadaa hab nidaamsan, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad la wadaagto ka soo bilow xagga sare oo leh calaamadda «Share».
Weedha quruxda badani wax badan bay qofka kaga tagtaaSidaa darteed, markaad dooranayso, isticmaal midka ku habboon wakhtigaas. Codsiga inkastoo uu ka baxsan yahay Play Store waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la soo dejiyo taariikhdan oo la calaamadeeyay bilawga May, marka ay tahay maalinta hooyada.
Download: Gabayo Maalinta Hooyada
Video Maalinta Hooyada Farxada leh
Maalinta Hooyadu waa mid ka mid ah dhacdooyinka muhiimka ah, gaar ahaan marka ay u dabbaaldegto xiriirka ka dhexeeya carruurta iyo qoyska. Dhowr maalmood ayaa laga xusaa dacallada adduunka, inta u dhaxaysa bilaha March, April iyo May, iyadoo la dhammaystirayo maalinta aabbaha oo la xuso 19-ka March.
Appka ugu fiican ee lagu qaabayn karo maalin kasta la noolaa waa in la sameeyo isku-duubni sawir si loo abuuro muuqaal slideshow ah oo waligeed loo hayo. Fiidiyowga Maalinta Hooyada Farxada leh waa codsi fudud oo dareen leh ocn kaas oo lagu abuurayo clip wax ka yar saddex daqiiqo oo wakhti ah.
Aaladda waxa aad isla markiiba dib u taabsiin kartaa sawirada, qaabayn kartaa si ay u qurux badan yihiin, sidoo kale ugu daraan nooc fariin ah. Waa App ka mid ah kuwa ugu caansan Play Store-ka, sidoo kalena ah kuwa ugu qiimaha badan, haddaba waa in aad isku daydaa haddii aad rabto in aad u hambalyeyso maalintan muhiimka ah ee muhiimka u ah qofka nolosha ku siiyay.
Hambalyo Maalinta Hooyada
Aqoonsiga Maalinta Hooyada waxay ku kasbataa adiga iyo in ka badan jacaylka qofka ugu muhiimsan aabbahaa nolosha oo dhan. Waxaad kaga yaabin kartaa qoraal iyo sawirro iyadoo ay ugu wacan tahay arjigan caanka ah ee la bilaabay dhawr sano ka hor oo la cusboonaysiiyay May 2021.
Hooyooyinka inta badan waxay ku jiraan waqtiyo wanaagsan iyo kuwo xun, xusuusta waxay ka dhigi doontaa maalinta farxad badan, Taasi waa sababta app-kan loogu magac daray "Hambalyada Maalinta Hooyada" loo furay.. Waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud, gaar ahaan isticmaalkeeda, haddii fariinta la koobiyo, dib u taabto sawir, iyo waxyaabo kale.
La wadaaga sawirada qalabka waa sahlan tahay, waxaad leedahay dhammaan shabakadaha bulshada ee firfircoon, ha ahaadeen Facebook, Twitter ama mid ka mid ah kuwa kale ee la heli karo, oo ay ku jiraan apps kale sida WhatsApp, Telegram, iyo kuwo kale. Miisaanka uu leeyahay waa ku dhawaad ​​5,2 megabytes oo si dhib leh uma isticmaalo xusuusta RAM.
Developer: Hal-abuurka Apps 2022
Weedhaha Maalinta Hooyada Farxada leh
U hurista wanaagsan ee Maalinta Hooyada ayaa mararka qaarkood ka fiican hadiyadda, gaar ahaan haddii aad si toos ah ugu soo dirto iyada, ama WhatsApp, Telegram ama mid ka mid ah shabakadaha bulshada. Codsiga Kelmadaha Maalinta Hooyada Farxada leh ayaa ku habboon haddii aad rabto inaad nuqul ka sameyso qoraal oo aad si dhakhso ah u dirto.
Marka lagu daro weedhaha, app-ka caanka ah wuxuu ku daraa sawirro, dooro midka ugu habboon waqtigaas oo guji dhammeeyey kadibna dooro ikhtiyaarka gaarsiinta. Kaadhadhka boostada iyo kaadhadhku inta badan waa kuwo la shakhsiyeeyay, iyaga oo siinaya ikhtiyaarka ah abuurista mid xoqan haddii aad rabto maalintan gaarka ah.
Kaarka inta badan waa la soo diraa, inkastoo ay jirto ikhtiyaarka isku mar la isku diro si ay u awoodaan in ay ku sameeyaan laba, in ka mid ah kuwa kale oo ka mid ah fursadaha kala duwan ee laga heli karo gudaha qalabka. Waxaa sameeyay injineer ka socda Madrid, kaasoo inta badan cusbooneysiiya.
Developer: Apps-ka Ruuxa Diinta ee Baybalka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Codsiyada ugu wanaagsan ee hambalyada Maalinta Hooyada
Habka Super Alexa iyo hawlaha kale ee sirta ah ee kaaliyaha Amazon
Taxanaha Amazon Prime ugu fiican 2022